ယောငျးက ဟာသဉာဏျရှိတဲ့သူတဈယောကျလား? - For her Myanmar
သိခငျြရငျတော့ ဒီအခကျြလေးတှနေဲ့ တိုကျကွညျ့နျော…
လောကကွီးမှာ လူ(၂)မြိုးပဲ ရှိပါတယျတဲ့။ ပြျောအောငျနတေတျတဲ့လူနဲ့ မပြျောတဲ့လူရယျလို့ပါ။ စိတျညဈစရာကတော့ လူတိုငျးလိုလိုမှာ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ကိုယျက ဘယျလိုစိတျနစေိတျထားနဲ့ ခံယူမလဲဆိုတာ ကိုယျ့ပျေါပဲ မူတညျတာပေါ့နျော။ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ အမွဲပွုံးပြျောပွီး စနောကျနတေဲ့ သူတခြို့ကို မွငျဖူးကွမှာပါ။ ကိုယျကရော သူတို့ထဲကတဈယောကျပဲလား??
(၁) ယောငျးက ရယျမောရတာကို နှဈသကျသူလား??
ရယျမောနရေတဲ့အခြိနျဟာ ဘဝမှာပြျောစရာအကောငျးဆုံးအခြိနျတှပေါပဲ။ ဒါကို ဟာသဉာဏျရှိတဲ့ ပြျောပြျောနတေတျတဲ့သူတခြို့က ပိုပွီးနားလညျပါလိမျ့မယျ။ ဟာသဉာဏျရှိတဲ့သူတှကေ သူမြားတှကေိုပဲ ပြျောအောငျလုပျတတျတဲ့လူတှေ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျတိုငျလညျး ရယျမောခွငျးကို နှဈသကျပွီး ကိုယျတိုငျပြျောရှငျဖို့အရေး၊ စိတျခမျြးသာဖို့အရေးကို ကွံဆောငျတတျကွပါတယျ။
(၂) ကိုယျ့ရဲ့ ဖွဈတညျမှုအားလုံးကို ကကြေနြေပျနပျကွီး လကျခံသူလား??
ယောငျးလေးတို့ရေ.. တို့တှအေားလုံးက ကိုယျကွိုကျတဲ့ အဆိုတျောမျောဒယျ မငျးသမီးလေးတှလေောကျတော့ ဘယျလှနိုငျမလဲလနေျော… ဒါပမေဲ့ ဟာသဉာဏျရှိတဲ့သူတှကေတော့ ကိုယျ့ရုပျရညျနဲ့ အနအေထား ပွညျ့စုံခွငျး မပွညျ့စုံခွငျးတှကေို အရှိကို အရှိအတိုငျး လကျခံတတျသူတှပေါ။ တဈခါတဈခါ သူတို့ကတောငျ ကိုယျ့ရဲ့အားနညျးခကျြတှကေို ကိုယျကိုယျတိုငျ ဟာသလုပျပွီးတောငျ ပွောရဲတဲ့ အကောငျးမွငျစိတျရှိသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ လူတိုငျး ကိုယျ့ဖွဈတညျမှုကို ဘဝငျမကတြာတှရှေိနတေဲ့အခြိနျမှာ ဒီလို ဟာသဉာဏျရှိတဲ့သူတှကေတော့ စံနမူနာထားရမယျ့လူတခြို့လညျး ဖွဈနတောပါ။
Related Article >>> နပြေျောတဲ့ဘဝ
(၃) တီထှငျဖနျတီးမှု အားကောငျးသူ တဈယောကျလား??
လူတှကေို ခကျြခငျြးပွုံးရယျအောငျလုပျနိုငျဖို့က ကိုယျတိုငျက ပြျောတတျပွီး အခွအေနအေခြိနျအခါနဲ့ လိုကျအောငျ ဖွတျထိုးဉာဏျကို ကောငျးကောငျးအသုံးခနြိုငျတဲ့သူတှမှေသာ လုပျနိုငျတာပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဟာသဉာဏျရှိတဲ့သူတှကေ တခွားသူတှထေကျပိုပွီး တီထှငျဖနျတီးမှုအားကောငျးတယျလို့ဆိုကွတာပေါ့။ ဟကျဟကျပကျပကျ ရယျမောခွငျးဟာလညျး ဉာဏျရညျထကျမွကျခွငျးရဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျတဲ့ ယောငျးတို့ရေ…
(၄) စနောကျတဲ့နရောမှာလညျး အရာရာကိုစောငျ့ထိနျးပါတယျတဲ့
ရယျမောရအောငျ သကျသကျစနောကျခွငျးနဲ့ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ ထိခိုကျစခေငျြလို့ကို စနောကျတာ…ဒီ နှဈခုဟာ တူမယောငျနဲ့ တျောတျောကွီးကို ကှဲပွားတာပါ။ ဟာသဉာဏျရှိတဲ့သူတှကေ ဒီလို သံသယတှေ ဖွဈစရာမလိုအောငျကို စနောကျတတျတာပါ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ဆို သူမြားကို မထိခိုကျစဘေဲနဲ့ ပြျောရှငျမှုတှကေို ဖနျတီးတတျသူတှပေေါ့။
Related Article >>> ပြျောရှငျမှုရဲ့ အနှဈသာရ
(၅) ဒေါငျဒေါငျမွညျ ကနျြးမာရေး ကောငျးသူမြားလညျး ဖွဈပါတယျတဲ့နျော။
ဟာသဉာဏျရှိတဲ့သူ တျောတျောမြားမြားက ကနျြးမာရေး ကောငျးကွတာ မြားပါတယျ။ သူမြားတှကေိုလညျး ရယျမောအောငျလုပျ၊ ကိုယျကိုယျတိုငျကလညျး ရယျမောပြျောရှငျနတေော့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတျောတျောမြားမြားက ဖတျြလတျသနျစှမျးပွီး မှတျဉာဏျကောငျးကွတာပါတဲ့။ စိတျဖိစီးမှုမြားနသေူတှအေတှကျ အဓိက အလိုအပျဆုံးဆေးတဈခှကျကလညျး ရယျမောခွငျးပါပဲနျော။
(၆) အသကျအရှယျကို ကိနျးဂဏနျးတဈခုလို့ပဲ သဘောထားပါတယျတဲ့။
အခွားသူတှေ အသကျနဲ့ ပတျသကျပွီး ညညျးညူနကွေတဲ့အခြိနျမှာ ဟာသဉာဏျရှိတဲ့သူတှအေတှကျတော့ အသကျကွီးတယျဆိုတာ ကိနျးဂဏနျးတဈခုကွီးလာသလိုဖွဈပွီး မှေးနဆေို့တာလညျး ပြျောပှဲရှငျပှဲလို သဘောမြိုးအပွငျ မပိုပါဘူး။ ဒီလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစိတျလေးနဲ့ ဖွတျသနျးတာကွောငျ့လညျး အသကျရှညျရှညျနထေိုငျနိုငျတယျဆိုတာ မဆနျးပါဘူးလို့ မငျမငျကတော့ ထငျမိတယျရှငျ့။
ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈပါလေ အပျေါက (၆)ခကျြနဲ့ ကိုကျညီနတေယျဆိုရငျတော့ ယောငျးလေးတို့ ဂုဏျယူသငျ့ပါပွီ။ ယောငျးလေးတို့ဟာ အငျမတနျ ဟာသဉာဏျရှငျပွီး ပြျောပြျောနတေတျတဲ့သူတှပေါပဲ။
ယောငျးလေးတို့ ထာဝရပြျောရှငျနိုငျတဲ့သူတှေ ဖွဈကွပါစနေျော။
References : Huffington Post
သိချင်ရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ တိုက်ကြည့်နော်…
လောကကြီးမှာ လူ(၂)မျိုးပဲ ရှိပါတယ်တဲ့။ ပျော်အောင်နေတတ်တဲ့လူနဲ့ မပျော်တဲ့လူရယ်လို့ပါ။ စိတ်ညစ်စရာကတော့ လူတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်က ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ခံယူမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ပေါ်ပဲ မူတည်တာပေါ့နော်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲပြုံးပျော်ပြီး စနောက်နေတဲ့ သူတချို့ကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ်ကရော သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ပဲလား??
(၁) ယောင်းက ရယ်မောရတာကို နှစ်သက်သူလား??
ရယ်မောနေရတဲ့အချိန်ဟာ ဘဝမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေပါပဲ။ ဒါကို ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူတချို့က ပိုပြီးနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဟာသဥာဏ်ရှိတဲ့သူတွေက သူများတွေကိုပဲ ပျော်အောင်လုပ်တတ်တဲ့လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်လည်း ရယ်မောခြင်းကို နှစ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်ဖို့အရေး၊ စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကို ကြံဆောင်တတ်ကြပါတယ်။
(၂) ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအားလုံးကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး လက်ခံသူလား??
ယောင်းလေးတို့ရေ.. တို့တွေအားလုံးက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်မော်ဒယ် မင်းသမီးလေးတွေလောက်တော့ ဘယ်လှနိုင်မလဲလေနော်… ဒါပေမဲ့ ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ့်ရုပ်ရည်နဲ့ အနေအထား ပြည့်စုံခြင်း မပြည့်စုံခြင်းတွေကို အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံတတ်သူတွေပါ။ တစ်ခါတစ်ခါ သူတို့ကတောင် ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဟာသလုပ်ပြီးတောင် ပြောရဲတဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကို ဘဝင်မကျတာတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလို ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ စံနမူနာထားရမယ့်လူတချို့လည်း ဖြစ်နေတာပါ။
(၃) တီထွင်ဖန်တီးမှု အားကောင်းသူ တစ်ယောက်လား??
လူတွေကို ချက်ချင်းပြုံးရယ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့က ကိုယ်တိုင်က ပျော်တတ်ပြီး အခြေအနေအချိန်အခါနဲ့ လိုက်အောင် ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့သူတွေမှသာ လုပ်နိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေက တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး တီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းတယ်လို့ဆိုကြတာပေါ့။ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောခြင်းဟာလည်း ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ…
(၄) စနောက်တဲ့နေရာမှာလည်း အရာရာကိုစောင့်ထိန်းပါတယ်တဲ့
ရယ်မောရအောင် သက်သက်စနောက်ခြင်းနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထိခိုက်စေချင်လို့ကို စနောက်တာ…ဒီ နှစ်ခုဟာ တူမယောင်နဲ့ တော်တော်ကြီးကို ကွဲပြားတာပါ။ ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေက ဒီလို သံသယတွေ ဖြစ်စရာမလိုအောင်ကို စနောက်တတ်တာပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆို သူများကို မထိခိုက်စေဘဲနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဖန်တီးတတ်သူတွေပေါ့။
Related Article >>> ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အနှစ်သာရ
(၅) ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကျန်းမာရေး ကောင်းသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။
ဟာသဥာဏ်ရှိတဲ့သူ တော်တော်များများက ကျန်းမာရေး ကောင်းကြတာ များပါတယ်။ သူများတွေကိုလည်း ရယ်မောအောင်လုပ်၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရယ်မောပျော်ရွှင်နေတော့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများက ဖျတ်လတ်သန်စွမ်းပြီး မှတ်ဉာဏ်ကောင်းကြတာပါတဲ့။ စိတ်ဖိစီးမှုများနေသူတွေအတွက် အဓိက အလိုအပ်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ကလည်း ရယ်မောခြင်းပါပဲနော်။
(၆) အသက်အရွယ်ကို ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလို့ပဲ သဘောထားပါတယ်တဲ့။
အခြားသူတွေ အသက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညည်းညူနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အသက်ကြီးတယ်ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကြီးလာသလိုဖြစ်ပြီး မွေးနေ့ဆိုတာလည်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလို သဘောမျိုးအပြင် မပိုပါဘူး။ ဒီလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစိတ်လေးနဲ့ ဖြတ်သန်းတာကြောင့်လည်း အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာ မဆန်းပါဘူးလို့ မင်မင်ကတော့ ထင်မိတယ်ရှင့်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ အပေါ်က (၆)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းလေးတို့ ဂုဏ်ယူသင့်ပါပြီ။ ယောင်းလေးတို့ဟာ အင်မတန် ဟာသဉာဏ်ရွှင်ပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူတွေပါပဲ။
ယောင်းလေးတို့ ထာဝရပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေနော်။
Tags: Fun, Funny, Humour, Letters from Heart, Sense, tips
ကိုယ်ဟန်အမူအရာတွေက ပြောနေတဲ့ ယောင်းရဲ့ အချစ်ရေး
Thu July 30, 2018